Ndị na-achọ ịchọta ahịa na-echekwa ụdị aghụghọ - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ndị na-ere ahịa na-ere ahịa na-echepụta Ụdị Tattoo
sonitattoo February 21, 2017
1. Ngwá na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ nke Dreamcatcher egbu egbu n'ubu ụmụ agbọghọ na-eme ka ha mara mma
Ụmụ agbọghọ ndị nwere akpụkpọ ahụ na-egbuke egbuke ga-aga maka ink odo na -acha anụnụ anụnụ, ihe nkedo egbu egbu na-atụ egwu n'ubu iji mee ka ha dịkwuo mma ma mara mma
2. Ihe eji egbu egbu na-eme ka ha maa mma
Ụmụ agbọghọ Brown na-achọ ka egbu egbu na-egbu egbu na ntanye aja ink na azụ. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha mara mma
3. Ihe nwuchi nrọ egbu egbu n'apata ụkwụ maka Ụmụ nwanyị ya na ink mara mma; eme ka ha mara mma
Ụmụ agbọghọ na-achọ ka a na-egbu egbu na-egbu egbu ma na-emepụta ink nke mara mma n'apata ụkwụ. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dịkwuo mma
4. Ihe eji egbu egbu na-eme ka ha maa mma
Ụmụ agbọghọ na-achọ ka a na-egbu egbu n'achọ. Ejiji egbu egbu a na-eme ka ha dị mma
5. Ihe nwuchi nrọ egbu egbu n'apata ụkwụ eme ka nwanyi yie anya
Ụmụ agbọghọ Brown na-achọ ka egbu egbu na-egbu egbu n'akụkụ akụkụ ahụ; egbu egbu egbu a na-eme ka ha mara mma ma dị mma
6. Egbu egbu egbu n'apata ụkwụ dị iche iche na-eweta ọmarịcha anya
Ụmụ agbọghọ Brown ga-ahụ ọnya Dreamcatcher n'akụkụ apata ụkwụ; ihe a na-egbu egbu na-emetụta akpụkpọ ahụ ha iji mee ka ha yie ihe dị mma ma mara mma
7. Ihe nwuchi nrọ egbu egbu na ụkwụ eme ka ụmụ agbọghọ nwee anya dị ịtụnanya
Ụmụ agbọghọ ga-aga maka egbugbu Dreamcatcher na ụkwụ ha. Nke a na-eme ka ha nwee anya dị ịtụnanya.
8. Ogbugbu egbu egbu n'ubu a na-eme ka ha mara mma
Ụmụ agbọghọ na-achọ ka a na-egbu egbu n'achọ na-acha anụnụ anụnụ iji mee ka anya ha mara mma
9. Ogbugbu na-egbu egbu na egbugbere ọnụ dị n'apụta na-eweta anya nwanyi
Ụmụ agbọghọ dị ka akara mara mma nke Dreamcatcher n'apịtị ụkwụ. Ejiji egbu egbu a mara mma.
10. Ogbugbu egbu egbu maka ogugu akuko na-eweta anya nwanyi ha.
Ụmụ agbọghọ dị ka ọmarịcha egbu egbu na-egbu egbu n'apata ụkwụ ha. Ụdị egbu egbu a mara mma ma mee ka àgwà ụmụ nwanyị dịkwuo mma.
11. Ihe nwuchi nrọ egbu egbu maka ubu na-enye anya n 'ụmụ agbọghọ
Ụmụ agbọghọ, na-eji uwe na-acha aka na-akacha aka ga-aga maka igbu egbu egbu na-eme ka ndị uweojii mara ha anya n'ihu ha.
12. Egbu egbu egbu na-eme ka ụmụ agbọghọ ahụ mara mma
Ụmụ agbọghọ, karịsịa uwe na obere mkpirisi dị mkpirikpi ga-aga maka egbugbere ahụ Dreamcatcher n'akụkụ akwara ha iji mee ka ha mara mma karịa ụmụ nwoke.
ọdụm ọdụmUche obiaka akaakara ntụpọegbu egbu mmiririp tattooszodiac akara akaraegbu egbu okpumehndi imewendị na-egbuke egbukemma tattoosegbugbu maka ụmụ agbọghọechiche egbugbuegbu egbu osisi lotusegbu egbuegbugbu egbugbudi na nwunyeegwu egwuakpị akpịudara okooko osisindị mmụọ ozikoi ika tattooỤdị ekpomkpannụnụenyi kacha mma enyiarịlịka arịlịkaEgwu ugoegbu egbu diamondagbụrụ eboGeometric Tattoosaka akaegbu egbu egbuokpueze okpuezena-egbu egbuakwara obiegbu egbu maka ụmụ nwokeima ima mmaọnwa tattoosụmụnne mgbuenyí egbu egbuegbu egbu hennaNtuba ntugharina-adọ aka mmangwusi pusiaka mma akaAnkle Tattoosn'olu oluegbu egbu ebighi ebiazụ azụụkwụ aka